गोलभेडा र भ्यान्टा खाँदा मृगौलाको पत्थरी ? यस्तो छ वास्तविकता » खबरहरुको एउटै केन्द्र
गोलभेडा र भ्यान्टा खाँदा मृगौलाको पत्थरी ? यस्तो छ वास्तविकता
आईतवार, बैशाख ३०, २०७५ १३:२१ मा प्रकाशित !
तरकारीको स्वाद बढाउन होस् वा सलाद, अचारका लागि गोलभेडाको प्रयोग दैनिक जीवनमा धेरै नै हुन्छ । भिटामिन, एन्टिअक्सिडेन्ट र मिनरल्सले भरिपूर्ण गोलभेडा स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक छ । गोलभेडा भिटमिन सीको राम्रो स्रोत हुनुका साथै जैविक सोडियम, फस्फोरस, क्याल्सियम, पोटासियम, म्याग्नेसियम र सल्फरको राम्रो स्रोत हो । गोलभेडामा रहेको गलूटाथीयोनले शरिरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढाउँछ भने प्रोस्टेट क्यान्सरबाट पनि शरिरलाई सुरक्षित राख्छ । कतीले गोलभेडा, पालुङ्गो र भ्यान्टा खाँदा पत्थरीको खतरा हुने मान्यता राख्छन् । आउनुहोस्, यसको वास्तविकताबारे जानकारी लिऔंः
गोलभेडा र पत्थरीबीचको सम्बन्ध के ?
मृगौलामा अक्जालेट र क्याल्सियम जस्ता तत्व जम्मा भएर एक ठोस् ढुङ्गाजस्तो बनेपछि पत्थरी हुन्छ । जब तपाईं अत्यधिक मात्रामा अक्जालेट भएका खानेकुरा खानुहुन्छ तब मृगौलामा पत्थरीको आशंका बढ्ने गर्छ । गोलभेडामा पनि अक्जालेटको मात्रा हुन्छ तर यो सिमित मात्रामा हुने भएकाले यसको सेवनले मृगौलामा पत्थरी हुँदैन ।
गोलभेडा खाँदा अपनाउनुस् यस्ता सावधानीः
सामान्य अवस्थामा गोलभेडा खाँदा तपाईंलाई कुनै प्रकारको रोगको खतरा हुँदैन । तर यदि तपाईं गोलभेंडाको अत्यधिक सेवन गर्नुहुन्छ भने यसको बियाँ निकालेर प्रयोग गर्नुहोस् । यसका साथै, यदि तपाईंलाई पहिले पनि पत्थरीको समस्या भइसकेको छ वा अल्ट्रासाउन्डमा साना पत्थरी देखिएको छ भने तपाईंले गोलभेडा, भ्यान्टा र खुर्सानीको सेवन कम गर्नुपर्ने विशेषज्ञ सुझाउँछन् । यस्ता रोगीले बियाँ निकालेर प्रयोग गर्न सक्छन् । यसका साथै, धेरैले गोलभेडाको अचार बनाउन सिलौटो प्रयोग गर्दछन् । कुनै पनि मसला, अचार, फलफूल वा तरकारी पिस्नका लागि सिलौटोको प्रयोग नगर्नुहोस् । यसले तपाईंलाई पत्थरी हुन थप सघाउ पुर्याउँछ ।
गोलभेडा खाँदा शरिरलाई हुने फाइदाः
गोलभेडामा भोक लाग्ने हर्मोनलाई कम गर्ने क्षमता हुन्छ । यसले तपाईंको तौल कम हुनुका साथै थुप्रै रोगबाट पनि राहत प्रदान गर्छ । गोलभेडामा भिटामिन सी, बिटाक्यारोटिन, लाइकोपिन, भिटामिन ए र पोटाशियमको प्रचुर मात्रा पाइन्छ जसले मुटुरोगको खतरा कम हुन्छ । गर्मीमा यसको सेवनन शरिरका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ ।
यी खाद्य पदार्थले पनि हुँदैन पत्थरीः
गोलभेडाका साथै खुर्सानी, भ्यान्टालगायतका बियाँ भएका आहारले पत्थरीको आशंका बढाउने धेरै मानिसको आशंका छ । यस्तै, दुधमा क्याल्सियमको मात्रा धेरै हुने भएकाले यो पनि पत्थरीको कारण हुनसक्ने बताउँछन् । तर यस्तो होइन । दुधमा क्याल्सियमको मात्रा धेरै भएपनि मृगौलाको पत्थरीमा यसको कुनै सम्बन्ध हुँदैन । जबकी वास्तवमा क्याल्सियमको कमीले मृगौलामा पत्थरीको समस्याको खतरा अत्यधिक हुने गर्दछ ।
यी खानेकुरा सेवन गर्दा सावधानी अपनाउन्सः
चिया, कफी, पालुङ्गो, धेरै नुनिला खानेकुरा, फास्ट फुड, बदामलगायतका खानेकुरा पत्थरीका कारण बन्न सक्छन् । यसका साथै सी–फूड र टेबल साल्टेड रेड मीटमा युरिक एसिड उच्च मात्रामा हुन्छन् जुन पत्थरीको कारण बन्ने गर्दछ । यसका साथै कम मात्रामा पानी पिउँदा पनि पत्थरी हुने सम्भावना उच्च हुन्छ ।
PREVIOUS POST Previous post: इन्डोनेसियाका विभिन्न चर्चमा आतंककारी हमला, नौ जनाको मृत्यु, कैयौँ घाइते
NEXT POST Next post: सरकारले ‘राष्ट्रघात’ र मोदी सँग विपरित कुनै सम्झौता गरेको छैन : प्रधानमन्त्री ओली
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते आईतवार, बैशाख ३०, २०७५ १३:२१
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस आईतवार, बैशाख ३०, २०७५ १३:२१
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण आईतवार, बैशाख ३०, २०७५ १३:२१
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी आईतवार, बैशाख ३०, २०७५ १३:२१
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? आईतवार, बैशाख ३०, २०७५ १३:२१